Indlela yokuphumelela ukuthembela kwamadoda
Kubalulekile ukuba uhlale uvakalelwa ithuba lokubonisa ukukhungatheka okanye ukuxoxa ngezinto ezibonakala zingalunganga kuwe. Khumbula, oku akutshoyo, kodwa uthetha njani!
Qinisekisa ukuba unexesha elaneleyo lokuba ude uxoxe ngokungafani.
Ukuba uzama ukumisa iqabane lakho endleleni yokusebenza okanye ukumbiza ngexesha lesidlo sasemini, ngoko kukho ithuba elikhulu lokuhlala linganelisekile kwaye lingabonakali ngenxa yokungabikho kwexesha. Ukuba oku kubalulekile, vumelana ngexesha apho unokuxoxa ngalo mbandela. Ingqalelo yakho ngexesha lomntu uya kukunika i-credit ye ​​trust, eya kukubonisa xa uxoxa ngxaki.
Musa ukusungula nantoni na!
Akunakwenzeka ukwazi kakuhle into eyenzekayo de ube uyayiva ngokwenene kwiqabane lakho. Musa ukucinga indlela acinga ngayo, cela nje. Oku kuya kukunceda kwiinkathazo kwaye ugweme iingcamango ezinkulu ezingathathi ixesha, ezingasetyenziselwa ingxoxo.
Musa ukuphazamisa kwixesha elidlulileyo kule ngxoxo. Ukuba ufuna ukuyicombulula ingxaki, yenza iqabane live ukuba liyanyaniswa. Xa uphakamisa ixesha elidlulileyo, uyayicacisa ukuba kungakhathaliseki ukuba kukho utshintsho kunye nemizamo eyenziwe, usacinga ukuba iphoso linaloo qabane. Ziziphi izikhuthazo zokuphucula?
Ukuba uphosakele into ethile - xolisa! Musa ukulibaziseka kwaye ungazami ukugxeka omnye umntu. Ukuba uthe waphula isithembiso, watsho okanye wenza into ongeyithandi ukuyivuma, ngoko uxolo okanye imbuyekezo ixhomekeke kuwe kuphela. Ngeke nje uzive ulunge ngakumbi ekubeni uqaphele ukukwazi ukunyaniseka, kodwa indoda yakho iya kufunda ukuthembela kuwe, ukwazi ukuqonda kwakho uxanduva.
Ukuphazamisa phambi kokuba imeko ifike kumda.
Ukuba uvakalelwa kukuba unomsindo - uphumle imizuzu eyi-15, hamba, uphulaphule umculo, wenze into ecaleni kwendlu ukuze uphumelele ukuthukuthela kwakho.
Musa ukuxabana phambi kwabahlobo.
Uqaphele ngokuzenzekelayo iqabane xa uqala ukufumana iingxaki eziphambili phambi kwabanye abantu. Ukongezelela, ukungavumelani, endaweni yokuba yingxaki yomntu, kuba nolwazi loluntu. Jonga kuyo kwimeko yeqabane lakho. Ngaba unokukwazi ukukhokela ingxoxo ethembekileyo kwaye evulekile ukuba kukho umkhosi onxamnye nawe? Vumelana ukuba uthetha malunga nento eyenzeka kude neenyawo ezingezofunekayo neendlebe.
Ziziphi iintlobo zamadoda abathanda abafazi?
Ziziphi izihloko amadoda athanda ukuthetha ngazo?
Ungayinqoba njani umlutha wekhompyutheni yomntu othandekayo?
Indlela yokutsala ingqalelo yamadoda
Ingaba ibhinqa lenza indoda ibe namandla?
Indlela yokuziphatha ukuze loo nto ihlaseke ngam?
Impembelelo yefowuni ephathekayo kwimpilo yabantwana
I-coat ye-Oatmeal kunye ne-alimondi kunye ne-tshokoleta
Umboniso wokuqala we "Umtsalane" eBondarchuk wenziwa eChertanovo
UJordan Dunn waba ngumyili weengubo zezingane
Ukuvumba komzimba wesetyhini
Itiyi ye-Ginger nge calendula kunye nesinamoni
Phuma kwikhefu lokunakekela abantwana
Ungasusa njani amacangci ukusuka kwi-ododant
Ukukhanya okulula kunye neeSaladi zoNyaka omtsha 2016
Iimpahla zegolide zesilivere ezinesiqingatha: 5 izizathu zokuthenga
I-pastry ye-Puff ne-sinamon, iresiphi yesiFrentshi enefoto
Ukuzonwabisa kwizinto ezimbini
Utshintsho lwama-hormonal kumantombazana kwiminyaka eyi-10
I-Honeymoon ihlala iholide kwaye iququzelele ukuba ifune ukuba wonke umntu abe nomona
Isitshalo seqanda esilula